﻿	အမျိုးသားသုံးကွန်ဒုံးက ဘာလို့ ကျွတ်ထွက်တာ ပေါက်ပြဲတာ ဖြစ်ရတာလဲ။ | Find My Method
အမျိုးသားသုံးကွန်ဒုံးက ဘာလို့ ကျွတ်ထွက်တာ ပေါက်ပြဲတာ ဖြစ်ရတာလဲ။
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ » အမျိုးသားသုံးကွန်ဒုံး » အမျိုးသားသုံးကွန်ဒုံးက ဘာလို့ ကျွတ်ထွက်တာ ပေါက်ပြဲတာ ဖြစ်ရတာလဲ။
Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. (2015). Canadian Contraception Consensus Chapter 5: Barrier Methods. JOGC Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada , 37. မှရယူရန် https://www.jogc.com/article/S1701-2163(16)39376-8/pdf